ဂက်ဆိုလိုင်း ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်သည် ဓါတ်ဆီ/လေနှင့် ဂက်ဆိုလိုင်း ဓါတ်ဆီတို့ရောထားရာမှ ပါဝါရရှိပြီး ထိုအရောသည် အတွင်းလောင်အင်ဂျင်မီးလောင်၍ ပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဓါတ်ဆီ/လေရောနှောရာမှ အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက်တွင် မီးပွားပါရှိသော ပလပ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍ မီးစတင်လောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
အတွင်းလောင်အင်ဂျင်ပါကွိုင်နှင့် ဓါတ်ဆီ/လေအရောသည် ဘတ်ထရီနှင့်ဆင်တူသည့် ပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့်အတူ လျှပ်ကူးပလပ်တစ်ခုသို့ပျံ့နှံ့စီးဆင်း၍လျှပ်စီးချောင်းစွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲစေပါသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်, အင်ဂျင်သည် လျှပ်ကူးပလပ်မပါရှိဘဲ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ လျှပ်ကူးပလပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အင်ဂျင်၏ အားလုံးသော ဆောင်ရွက်မှုများကို လွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် လျှပ်ကူးပလပ်သည် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2. မီးပွားမှတဆင့် အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက် မီးလောင်ခြင်း: (i) လျှပ်ကူး
မီးလောင်စေသည့်အရာသည် လျှပ်စစ်ချောင်း အလယ်ဗဟိုနှင့် မြေပြင်လျှပ်စစ်ချောင်းတို့ကို စုစည်း၍ ဗို့အားအမြင့်နှုန်းထားကို တက်လာစေသောအခါ လျှပ်စစ်ချောင်းများအကြားရှိ လျှပ်ကာပစ္စည်းသည် ပျက်စီးပြီး အားမရှိသောကြောင့် လျှပ်စစ်စီး မီးပွားကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤမီးပွား၏စွမ်းအင်သည် လေ/ဓါတ်ဆီအရောတို့ကို ဖိညှစ်မိသောအခါ မီးလောင်နိုင်ပါသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်သည် လျှင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ (1/1000 seconds).
ပလပ်၏ကဏ္ဍမှာတိကျသည့် စွမ်းအားပြည့်သော မီးပွားများ လိုအပ်ချိန်တွင် အတွင်းလောင်အင်ဂျင်ရှိ လေ/ဓါတ်ဆီအရောကို ဖနှော၍ စက်လည်ပတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
2. အတွင်းလောင်အင်ဂျင်အတွင်း မီးပွားဖြစ်ပေါ်လာခြင်း: (ii) အတွင်းလောင်အင်ဂျင်အတွင်း မီးလောင်ခြင်း
လျှပ်ကူးတွင် ကွာဟနေသောအပိုင်းရှိ အမှုန်စလေးများသည် မီးတောက်အဆံများဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ယင်းအမှုန်စလေးများ ဓါတ်ပြုသောအခါ လျှပ်စစ်စီးနေသော မီးပွားများသည် အတွင်းလောင်အင်ဂျင်အတွင်း မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းဓါတ်ပြုခြင်းသည် မီးပွားအကြားရှိ ကွက်လပ်တွင် တဖြည်းဖြည်းကြီးသည်ထက် ကြီးလာပါသည်။
သို့သော် အပူထုတ်လွှင်ခြင်းထက် မီးငြိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုက ပို၍များလာသောအခါ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်သည့် လျှပ်ကူးအကြားရှိ ကွက်လပ်တွင် မီးပွားများ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီး မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းလာသောအခါ အတွင်းလောင်အင်ဂျင်ကို စွမ်းအားပိုပြည့်လာစေပါသည်။
သို့သော် ထိုအခြေအနေ၌ ကွိုင်၏စွမ်းဆောင်ရည် အတိုင်းအတာလွန်နေသည့် အားမသွင်းထားသော၊ မီးလောင်မှုကို အားမပေးသော ဗို့အားအကြီး လိုအပ်ပါသည်။
3. ရရှိနိုင်သော လျှပ်ကူးပလပ်အမျိုးအစားများ
နီကယ် TT ပလပ်တီနမ် TT အီရီဒီယမ် TT
အစစ်အမှန် နှင့် အတုအယောင်
1. သွင်ပြင်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
2. နှိုင်းယှဉ်သည့် အပိုင်း
3. အတုအယောင် စပါ့ ပလပ်များကြောင့် ပြသနာဖြစ်ပွားရခြင်း
ပြသနာ 1: ဆီစားသက်သာစေမှုသည် လျော့နည်းလာသည်။
ရှေ့နောက်မညီစွာ မီးခတ်နေပါက ပြည့်စုံမှုမရှိသော လောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ ဆီမလောင်ကျွမ်းပါက စပခ် ပလပ်ပေါ်တွင် မဲတူး၍ ကျပ်ခိုးဖြစ်စေပြီး တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆီစားသက်သာမှု လျှော့ကျလာကာ အင်ဂျင်စတင်လည်ပတ်မှုလည်း နှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြဿနာ 2: ဟိုက်ဝေးနှင့် တောင်အတက်လမ်းများတွင် အင်ဂျင်ပါဝါ ကျလာသည်။
ကြေးအလယ်ကြောရှိ လျှပ်စီးရန်ခေါင်းမပါရှိမှုကြောင့် အပူပျောက်ကွယ်စေနိုင်မှု အားလျော့နည်းကာ ကြိုတင်လောင်ကျွမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဟိုက်ဝေးလမ်းများနှင့် တောင်တက်ရသည့် အခြေအနေများတွင် အင်ဂျင် ပါဝါကျဆင်းလာသည်။.
ပြသနာ 3: ပလပ်အရည်ပျော်လာသည်။.
အပူလွန်နေသော ပလပ်များကို ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် လျှပ်တိုင်များကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
4. ပါဝါကျခြင်းနှင့် အရည်ပျော်ခြင်းများအဘယ့်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း။
DENSO ပလပ်တွင် ကြေးအလယ်ကြောပါရှိသည်
ကြေးသည် အကောင်းဆုံးသော အပူ ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ မြင့်မားသည့်အပူချိန်သည် အလျှင်အမြန် အလယ်ခေါင်းမှ ပျောက်ကွယ် သွားပြီး အရည်ပျော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ကြေးအလယ်ခေါင်းမပါရှိမှုသည် အပူပျံ့နှံ့စေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို လျော့နည်းသွားစေသည်။ ကြာရှည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် အပူဖြစ်ပွားလာစေပြီး ပါဝါကျလာစေသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် ဂရောင်းခေါင်းကို အရည်ပျော်စေပြီး နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အင်ဂျင်အား ပြင်းထန်သည့် ပျက်ဆီးထိခိုက်မှုမျိုးဖြစ်စေသည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ သေချာပါစေ
အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းရပ်များမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ဆုံးရှုံးမှု၊ ကုန်ကျမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများအတွက် DENSO တွင် လုံးဝတာဝန်မရှိပါ-
- ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ဖော်ပြထားသော သတိပေးချက် သို့မဟုတ် သတိပြုရန်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
- ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုခြင်း၊ နှင့်
- DENSO လျှပ်ကူးပလပ်နှင့် မသက်ဆိုင်သော အခက်အခဲများ။
※”လျှပ်ကူးပလပ်” ၏ဆိုလိုရင်းမှာ DENSO ထုတ်သော လျှပ်ကူးပလပ်များဖြစ်ပြီး Iridium Power, Iridium TT, Iridium
Racing, Iridium Plus,နှင့် Iridium Tough, Iridium Long Life, Double Platinum, U-Groove, Resistor, Standard, Nickel TT,
Platinum TT, Two-Tops တို့ဖြစ်ကြပြီး မကန့်သတ်ထားပါ။
● DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို လေကြောင်းယာဉ်များဖြစ်သော လေယာဉ်ပျံများ၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ဂလိုက်ဒါ နှင့် ဒရုန်းများတွင် မည်သည့်အခါမှ ထည့်မသုံးရပါ။ DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို လေကြောင်းယာဉ်များအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားသည်မဟုတ်ပါ- အသုံးပြုလျှင် အင်ဂျင်တွင် ချွတ်ယွင်းချက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းနှင့် အခြားထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
● ဤထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို အောက်ပါနေရာများတွင် မည်သည့်အခါမျှ မသုံးရပါ၊ အင်ဂျင်အတွင်း ဂျင်နရေတာနှင့် ဂက်စ်သုံးအပူပေး ပန့်လေအေးပေးစက်စနစ်များဖြစ်သည်။ DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို ယင်းနေရာများတွင် ထည့်သွင်းသုံးရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားသည်မဟုတ်ပါ၊ အသုံးပြုခဲ့လျှင် မတော်တဆထိခိုက်မှုများဖြစ်သော ပါဝါထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ တွင်ဖော်ပြထားသော DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို ဂျင်နရေတာ(ဂက်စ်အင်ဂျင်) အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင့် DENSO ကိုယ်စားလှယ်အား အသေးစိတ်အချက်များအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။
● DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို ဂက်စ်လောင်ညှိမှုများအတွက် ဘယ်သောအခါမှ အသုံးမပြုရပါ။ DENSO လျှပ်ကူးပလပ်များကို ထိုနေရာများတွင် အသုံးမပြုရပါ၊ သုံးခဲ့သော် လောင်ညှိစက် ချွတ်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် ကိရိယာများပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
● အင်ဂျင်ကို သေချာစွာ ပိတ်ပြီး ဘတ္ထရီကို ပလပ်များ မလဲမီ သို့မဟုတ် ချိန်ညှိခြင်းမပြုမီ ဖြုတ်ပါ။ ယင်းသတိပေးချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ဖြစ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာများ ထိခိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
လျှပ်ကူးပလပ် ကိုင်တွယ်လွှဲပြောင်းရာတွင် သတိပေးချက်များ
● ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ပြုပြင်ရေးလမ်းညွှန်ကို တပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်အချက်များအတွက် အမြဲကြည့်ရှုပါ။
● ဘူးခွံ၊ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာနှင့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် သတိပေးချက်များကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။
● လျှပ်ကူးပလပ်များကို လွတ်မကျပါစေနှင့်။ ယင်းသည် လျှပ်ကူးပလပ်၏ အတွင်းပိုင်းအား ကွဲအက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲဟမှုကျဉ်းမြောင်းသွားခြင်းဖြစ်စေကာ၊ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အဟန့်တားဖြစ်စေသည်။
● လျှပ်ကူးပလပ်ကို ကွာဟမှုပေးရန်လိုလျှင်၊ နောက်ဘက်အောက်ခြေသိုင်းကြိုးကို သင့်လျော်သည့်ကိရိယာများသုံး၍ ကွေးညွတ်ပါ။ ကွာဟမှုပေးရာတွင် ဗဟိုလျှပ်ခေါင်းကို ဆတိုးခြင်းဖြင့် လက်တန်းမပြုလုပ်ရပါ။ ကွာဟမှုကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးကာ ဗဟိုလျှပ်ခေါင်းကို မထိခိုက်ပါစေနှင့်။ ကွာဟမှုကို အခြားအကြံပြုချက်များမရှိလျှင် ယာဉ်အတွက်သီးခြားဖော်ပြထားသော ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပေးချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
မွမ်းမံထားသော ယာဉ်များနှင့် ချိန်ညှိရာတွင် သတိပေးချက်များ
● DENSO အနေဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အင်ဂျင်များ သို့မဟုတ် ယာဉ်များမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ဆိုးကျိုးများအတွက် တာဝန်ယူပေးရန် မသက်ဆိုင်ပါ။
● သုံးစွဲသူအနေဖြင့်သာ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောအင်ဂျင်များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်၊ ယင်းတို့တွင် ကွာဟာခြင်း၊ အပူသက်ရောက်မှု၊ အတိုင်းအတာ၊ အစွန်း၊ နှင့်/ သို့မဟုတ် အဆို့ရှင်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ပင်စတင်များ ရှင်းထုတ်ခြင်းများတင် မကဘဲ အခြားအကြောင်းများစွာလည်းပါဝင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ဝဘ်ဆိုက် သတိပေးချက််များ
● ယှဉ်ပြညွှန်းဆိုချက် နှင့် ထုတ်ကုန်ဇယားများရှိ သတိပေးချက်များသည် အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏ လျှပ်ကူးပလပ်များအကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်-
◆ ညွှန်းဆိုမှုအတွက်သာ သုံးပါသည်။ ဇယားရှိ ဖော်ပြချက်များသည် ပလပ် ကို ယှဉ်ပြညွှန်းဆိုချက်တွင် သီးခြားဖော်ပြထားလျှင် တပ်ဆင်သည့်အခါရလာမည့် လျှပ်ကူးပလပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံထားခြင်း မရှိပါ။ အသုံးပြုခြင်းအခန်းတွင် DENSO မှ ထောက်ခံသော ပလပ်များကို အမြဲစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။
◆ လျှပ်ကူးပလပ် အသေးစိတ်အချက်များ (တည်ဆောက်ပုံ၊ ကုန်ကြမ်း စသည်။) ထုတ်လုပ်သူအလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
◆ သင့်လျော်မည့် လျှပ်ကူးပလပ်အမျိုးအစားကို ယာဉ်အလိုက်အသုံးချဇယားတွင် ရွေးချယ်ပါ။ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင်၊ သင့် DENSO ကိုယ်စားလှယ်အား မေးမြန်းပါ။
● ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာနှင့် ဝဘ်ဆိုက်များရှိ အကြောင်းအရာများကို ပုံမှန် အက်ဒိပ်လုပ်သော်လည်း အသုံးချပုံအသစ်များ နှင့် သို့မဟုတ် OE အစားထိုးအသစ်ကိုတော့ နေ့စဉ် တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ မအားထားနိုင်ပါ။ အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲများရှိသော် သင့် DENSO ကိုယ်စားလှယ်အား ထပ်ဆောင်းအကူအညီအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။
●အခွန်နှင့် တပ်ဆင်ခများကို ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွင် မဖော်ပြထားပါ။
● ဤထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ဝဘ်ဆိုက် ရှိ အချို့ လျှပ်ကူးပလပ်များသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ အစစ်မှန် ပစ္စည်းများဖြစ်ကာ ညွှန်းဆိုကိုးကားရန်အတွက်သာ သုံးနိုင်ပြီး တိုက်ရိုက် မရောင်းချပေးနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင့် DENSO ကိုယ်စားလှယ်အား အသေးစိတ်အချက်များအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။
● ထုတ်ကုန်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အသေးစိတ်အချက်များသည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မပြုဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
● ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော လျှပ်ကူးပလပ်များ၏ ရုပ်ပုံများသည် ရုပ်လုံးပေါ်စေရန်ရေးဆွဲထားချက်များသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့သုံးထုတ်ကုန် နှင့် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
အခြေအနေ သာမန် ကာဘွန်ပေကျံခြင်း ဆီပေကျံခြင်း
ခဲမရောဓါတ်ဆီကို အသုံးပြုသောအခါ ကြားခံကရိယာအောက်ခြေသည် ရံဖန်ရံခါတွင် အဖြူရောင်(သို့) မီးခိုးရောင်ဖြစ်လာပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်ချောင်းများသည် အနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းလာပါသည်။
ခဲမရောဓါတ်ဆီကို အသုံးပြုသောအခါ ကြားခံကရိယာအောက်ခြေသည် အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်လာပါသည်။
ကာဘွန်ခြောက်ကို ကြားခံအောက်ခြေနှင့် လျှပ်စစ်ချောင်းမျက်နှာပြင်တို့တွင် ထားလိုက်ပါသည်။ ဆီ(သို့)ဓါတ်ဆီတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသောကြားခံကိရိယာအောက်ခြေနှင့် လျှပ်စစ်ချောင်းသည် ပြောင်လက်သော အနက်ရောင်ဖြစ်လာပါသည်။
အင်ဂျင် အင်ဂျင်ကို နှုန်းထားအနိမ့်(သို့)အမြင့်နှင့် စက်နှိုးသောအခါ(သို့) မောင်းနှောင်သောအခါ ၎င်းအင်ဂျင်သည် ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားတွင် လည်ပတ်နေပါသည်။ အင်ဂျင်စက်နှိုးခြင်းကို နှုန်းထားအနည်းငယ်ဖြင့် မောင်းနှင်ပါက ဆိုးရွားနိုင်ပါသည်။ အင်ဂျင်စက်နှိုးခြင်း မမှန်ကန်ပါက ထိုအင်ဂျင်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ပျက်စီးခြင်းနှင့်အရှိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ (လျှပ်ကူးပလပ်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အင်ဂျင်ပြဿနာ ၉၀%နီးပါးသည် ကာဘွန်ပိတ်ခြင်း(သို့) ဆီပိတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။)
အချိန်ကြာမြင့်စွာ အင်ဂျင်အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း(သို့) အပူချိန်နည်းသည့်အချိန်တွင် မောင်းနှင်ခြင်း
အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက် အချိန်သတ်မှတ်ရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်း
ပစ်စတင်ကွင်းများအကြောင်းလိုက်စုတ်ပြဲခြင်း၊ အဆို့ရှင်လမ်းညွှန်များ(သို့)ဆလင်ဒါနံရံတို့ အကြောင်းလိုက်စုတ်ပြဲသောကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းသည့် အခန်းထဲသို့ ဆီယိုစိမ့်ခြင်း
1 သို့မဟုတ် 2: အပူချိန်ပမာဏလျော့နည်းသော(သို့) ပြန်လည်တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်ရှိ လျှပ်ကူးပလပ်ကို အသုံးပြုပါ။
3 မှ 5: ပြန်လည်ညှိခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါ။
အင်ဂျင်အသစ်(သို့) စစ်ဆေးထားသော အင်ဂျင် လည်ပတ်နေစဉ် ထိန်းချုပ်ထားသော ဆီစီးဆင်းမှုမတိုင်မီအချိန်တွင် လျှပ်ကူးပလပ်များသည် စိုစွတ်လာပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များတွင် ပလပ်ကိုသန့်ရှင်းပြီး ယခင်နေရာသို့ပြန်ထားပါ။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါက အင်ဂျင်ကို အသေအချာစစ်ဆေးရန် လိုအပါပါသည်။
အခြေအနေ အပူလွန်ကဲခြင်း အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက် မီးစတင်လောင်ခြင်း ကြားခံကရိယာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း
ကြားခံကိရိယာအောက်ခြေသည် လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအပူမှတဆင့် အရောင်ချွတ် ပစ္စည်းသည် အဖြူရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
လျှပ်စစ်ချောင်းသည်လည်း လောင်ကျွမ်းသွားပြီးအဖြူရောင်(သို့) ခရမ်းရင့်ရောင်သို့ ပြောင်းသွားပါသည်။
လျှပ်စစ်ချောင်းများသည် မကြာမီအချိန်အတွင်း ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ချောင်းသည် အရည်ပျော်ကျသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ကဲသည့်အခြေအနေများတွင် ကြားခံကရိယာအောက်ခြေသည်လည်း အရည်ပျော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက်အောက်ခြေတွင် ဒေါင်လိုက်အက်ကြောင်းရာတစ်ခုရှိပါသည်။ လျှပ်ကူးပလပ် အသွင်အပြင်သည် အပူလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများ(သို့) ခဲပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများနှင့်ပုံစံတူပါသည်။
အင်ဂျင် အင်ဂျင်ကို အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ (သို့) ဝန်အားများများဖြင့် တဆက်တည်း မောင်းနှင်သောအခါ အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေအားသည် လျော့ကျလာပြီး အရှိန်နှုန်းသည်လည်းလျော့ကျလာပါသည်။
ဤအရာသည် အပူလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းနေသည့် အခန်းအတွင်းရှိ အပူချိန်သည် လျှင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီး လျှပ်ကူးပလပ်နှင့်ပစ်တန်ခေါင်းနှစ်ခုစလုံးကို ပျက်စီးစေပါသည်။
အင်ဂျင်ကို အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ (သို့) ဝန်အားများများဖြင့် တဆက်တည်း မောင်းနှင်သောအခါ အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေအားသည် လျော့ကျလာပြီး အရှိန်နှုန်းသည်လည်းလျော့ကျလာပါသည်။
အတွင်းလောင်အင်ဂျင်စက် အချိန်ကိုက်ဖြစ်မှုကို ဆောလျင်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း